NAGU SAABSAN - Warshada Caagagga ee Xishun
XAASHI CLEAR ACRYLIC
XAASHI ACRYLISKA CAD OO BAXAY
XAASHIDA MIDABKA CASRI AH
XAASHIDA MIDABKA BAXAY
XAASHI QOSOL BADAN
XAASHI KASOCOTA XAASHIGA
XAASHI ACRYLISKA KA-hortagga- ololaya
XAASHI DIFFUSER ACRYLIC
XAASHIDA QURXANKA Akril
XAASHI MARBLE ACRYLIC
XAASHI GLITER ACRYLIC
Xaashiyaha kale ee Akril-ga ah
AALADAHA LA CADDAYNAY EE ACRYLIC
PDF soo dejiso
Xishun Plastics Warshada
Xishun Plastics waxaa la aasaasay 1996, waa wax soo saarka, iibinta, farsamaynta xaashida akril ee mid ka mid ah ganacsiyada la wada leeyahay. Xishun balaastikada ah waxay leedahay warshad wax soo saarka saxan fasalka extrusion, shubista heerka warshad soo saarista saxan iyo warshad processing acrylic, ay calaamad GARY, si fiican u iibiyey in ka badan 50 dal iyo gobollada, oo noqday shirkad muhiim ah in wax soo saarka saxan PMMA gudaha. Adeeggeeda tayada iyo iibka ka dib ayaa ammaanay oo aqoonsaday dadka ku jira warshadaha. Xishun Plastics waxay soo bandhigaysaa tignoolajiyada la isku halayn karo iyo khibrad maaraynta wax soo saarka gudaha iyo dibaddaba. Alaabooyinka ugu muhiimsan waa xaashida PMMA (darajada extrusion, darajo tuurista), MMA monomer iyo farsamada gacanta akril, taas oo taarikada lagu soo saari karo noocyo iyo midabyo kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Sannado badan oo horumarineed ka dib, warshadeenu waxay la socotaa wakhtiyada, waxay u hoggaansamaan ujeedada maamulka ganacsiga ee "horumar ballaaran oo qoto dheer, guul-guud", xoog farsamo oo xoog leh, waxay ku dadaalaysaa badbaadada tayada, waxay ku dadaalaysaa horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, iyo wuxuu ku dadaalaa horumarinta hibada. Ka dhig warshadeena in ay ilaaliso dardar wanaagsan oo horumarineed ee tartanka suuqa. Miisaanka warshadu waa uu kordhaa sanadba sanadka ka dambeeya, faa’iidada dhaqaalena way korodhaa sanadba sanadka ka dambeeya.
Baahidaada, xaqiijintayada! Waxaan ballan qaadeynaa: "tixgeli adeegga, alaabada tayada leh, qiimaha doorbidka", had iyo jeer u hoggaansanaanta "tayada ugu horreysa, macaamiisha ugu horreysa" ujeedada, si ay kuu siiyaan alaab wanaagsan.
Balaadhinta suuqa waa yoolkeena, waxaan wanaajin doonaa heerka adeegga, waxaan ku dadaali doonaa inaan abuurno qiimaha wax soo saarka, waxaan diyaar u nahay inaan xoojinno xiriirka, iskaashiga daacadda ah, horumarka guud, oo aan gacmaha is qabsano si aan u abuurno mustaqbal wanaagsan.
Iyada oo leh in ka badan 24 sano oo waayo-aragnimo ah, XISHUN acrylic waxa uu ku guulaystey magac aad u wanaagsan xirfadayada iyo tayada wax soo saarka ee heer sare ah. Haddii ay jirto fursad aan iska kaashan lahayn mustaqbalka, XISHUN wuxuu ku kalsoonaan doonaa inuu noqdo lammaanahaaga aamin ah!
No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, degmada Shunde, magaalada Foshan, Gobolka Guangdong
LA HELI KARO 8 subaxnimo ilaa 18 galabnimo
Cinwaanka: No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, degmada Shunde, magaalada Foshan, Gobolka Guangdong
Taleefanka: +86 0757 27886999